Steel Sakhiwo System Abakhiqizi futhi abahlinzeki - China Steel Sakhiwo System Factory
Ukuboniswa okuyingxenye kwemikhiqizo yenkampani
Ukuboniswa okuyingxenye kwemikhiqizo yenkampani Ngokuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe, ukusetshenziswa kwezakhiwo zensimbi kubunjiniyela bokwakha emhlabeni kukhula ngokwengeziwe. Welding kuyinto ebaluleke kakhulu ukucutshungulwa ubuchwepheshe ekwakheni isakhiwo sensimbi. Ngokwezibalo ezivela emazweni athuthukile, insimbi esetshenziswe kuphela ngemuva kokushisela i-akhawunti engaba ngu-45% wokukhishwa kwensimbi minyaka yonke. Ekupheleni kweminyaka yama-1980, izakhiwo zensimbi eziphothene zazine-30% ...
Ukukhiqizwa kwenkampani nokwakhiwa kwesakhiwo
Isingeniso Amandla obuchwepheshe enkampani: Le nkampani inabaqambi abayi-7, abakhi bezakhiwo ezi-3, abaklami bezakhiwo aba-2, nomklami wamanzi nogesi o-1, abathathu babo asebenze esikhungweni sokuklama iminyaka engaphezu kwengu-3. Emkhakheni ohambisanayo wobungcweti, ubuncane bokuphila kwabaklami yiminyaka emihlanu, futhi impilo yokusebenza ephezulu ifinyelele eminyakeni eyi-13. Ihhovisi lokukhiqiza lenkampani lino-2 wensimbi eqinisa umklami; Abasebenza Kwezobunjiniyela ...